Semalt: I-Website ye-Intanethi ye-Free Scraper You Need to Know About
idatha kwiiwebhusayithi kunye nokugcina ulwazi kwiedatha. Ukukhwa kwewebhu kubandakanya ukusebenzisa amathuluzi okucoca idatha ejika iifayile ezingaqulunqiweyo kwiwebhusayithi kumaphepha ahlelwe kakuhle. Ehlabathini lonke, kukho ukufumaneka kwezixhobo ezikhululekile zewebhusayithi ezisebenzisana ngokukhawuleza kunye neziza ezifana nabantu.
Kwi-shishini lorhwebo lokusasaza, iifayili ze-web scraper zidlala indima ebalulekileyo kwiiblogi, abanikazi bewebhusayithi, abathengisi kunye ne-webmasters.
Nalu uluhlu lwefayili yefayili ekhethiweyo yamahhala enokuyenza kwaye uyifake kwi desktop yakho.
I-Mozenda iyisitoreji sewebhu (free) sokurhola esichukumisa kalula idatha kwiwebhu. Isofthiwe yeMozenda ivumela abasebenzisi ukukhuphela nokukhipha umxholo kwiwebhsayithi ngaphandle kokubhalisa. Le software inabasebenzi abaxhaphakileyo be-intanethi enikeza iingcebiso kubathengi malunga nendlela yokuyisebenzisa nokuyifaka kwiidisktops zabo.
I-Crawl ye-Common scraper
I-Crawl eqhelekileyo yenye ye-software ecacileyo ephezulu ye-scraper eyenza abasebenzisi bokugqibela abanomxholo kunye nemethadatha. I-Crawl evamile inika abathengi abanakho iifayile zedatha.
Isoka elihle liziko lewebhu lewebhu elikhululekile elenzelwe ukukhupha idatha ecebileyo kwiilwimi ze-XML kunye ne-HTML. I-Soup Beautiful i-software ye-Python ifakwe kwisofthiwe efakwe kwi-Ubuntu system.
I-Diffbot isofthiwe esetyenziswa ngokubanzi ngabaphuhlisi ukukhipha idatha kwiisayithi. I-Diffbot isebenza ngokuguqula isayithi ibe yiNkqubo yoLungiselelo lweSicelo.
I-software ye-grabby inceda abacebisi bezentengiso kunye nabaphuhlisi ukuba bahlaziye idilesi ze-imeyile. Akukho mfuneko yokufakela ukusebenzisa i-Grabby yamahhala website ye-scraper.
Ngokutsha, i-ScraperWiki yatshintsha igama lenkampani kwi-QuickCode.
I-ScrapeHero yiziko lewebhu le-free scraper eliguqulela indawo kwi-API.
I-Extractor Content Content
Xa kuziwa kwi-web scraping, isofthiwe oyisebenzisayo ixelela ezininzi ngezakhono zoshishino lakho. ukukhipha idatha kwimithombo emininzi . I-Web Content Extractor inikezela abasebenzisi isicatshulwa seveki ezimbini kunye nesiqinisekiso sokubuyisela imali.
I-Winautomation ithuluzi lokuqhafaza lewebhu elenza abasebenzisi bakwazi ukuzenzekelayo imisebenzi esekelwe kwiwebhusayithi. Le software isebenza kwiinkqubo zokusebenza ze-Windows.
Isixhobo sokutsala i-Octoparse
I-Octoparse isofthiwe esekelwe kwi-Windows esekelwe kwihhafu kwiwebhu. I-Octoparse ijika idatha engaqinisekanga kwiifayile ezibhalwe kakuhle ngaphandle kweprogram. Esi siqhelo sisoloko sinconywa kubathengisi ngaphandle kobunzima beprogram.
Ukuba usebenze kwi-extracted data data extraction, i-Connotate iyona software engcono yokufaka kwi desktop yakho. I-Connotate inikezela abasebenzisi imimiselo efanelekileyo malunga nendlela yokukhangela idatha kwiwebhusayithi.
Le yiprojekti engcono kakhulu yokutshitshiswa kwiprojekthi yakho yokuphucula injini. CrawlMonster ivumela abathengisi ukuba bahlole ii-site ezahlukeneyo ukuvavanya iinkcukacha ezahlukeneyo ezikhoyo kwiwebhu.
Ukukhutshwa kwewebhu kukuquka ukujika idatha ehleliweyo kunye neyakhekileyo kwiifayile ezibhalwe kakuhle. Izixhobo zokucoca iWebhu zivumela abanikazi bewebhu, ii-bloggers kunye nabacebisi bamashishini ukuba bakhuphe iindidi ezahlukeneyo zeenkcukacha kwiinjongo zombini nakwi-intanethi. Khuphela uze ufake ifayile yewebhu ye-free scraper eyenzelwe ukuhlangabezana neemfuno zakho kunye neenkcukacha.